Global Ecommerce: otomatiga vs mashiinka vs tarjumaada dadka ee deegaanka | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 18, 2020 Arbacada, Nofeembar 18, 2020 Augustin Prot
Ganacsiga xuduudaha ee xuduudaha ayaa kor u kacaya. Xitaa kaliya 4 sano kahor, a Warbixinta Nielsen ayaa soo jeediyay in 57% dadka wax iibsanaya waxay ka iibsadeen tafaariiq dibadda ah 6-dii bilood ee la soo dhaafay. Bilihii la soo dhaafay adduunka COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay tafaariiqda adduunka oo dhan.
Ka iibsiga lebenka iyo hoobiyeyaasha ayaa si weyn hoos ugu dhacay Mareykanka iyo UK, iyadoo hoos u dhac ku yimid wadarta suuqyada tafaariiqda ee Mareykanka sannadkan ayaa la filayaa inuu labanlaab noqdo kii soo maray xiisadda dhaqaale toban sano ka hor. Isla mar ahaantaana, waxaan aragnay koror aad u ballaaran ee ganacsiga e-xuduudaha ah. TafaariiqX qiyaasta ganacsiga e-xuduudaha ee EU-da ayaa kordhay 30% sanadkan. Gudaha Mareykanka, xogta laga helay Global-e la helay in ganacsiga caalamiga ayaa kordhay 42% bishii May ee sanadkan.
Meelkasta oo astaanta tafaariiqdaadu ku saleysan tahay iibka caalamiga ah wuxuu noqon karaa nolol. Maaha wax lala yaabo in suuqleyda adduunka oo dhan ay raadinayaan inay qabtaan qeybtaan sii kordheysa ee ganacsiga cusub. Si kastaba ha noqotee, si wax ku ool ah loogu soo qabto macaamiisha xudduudaha ka gudubta suuqleydu waxay u baahan yihiin inay ka gudbaan oo keliya bixinta tarjumaadda goobta mar martida ay degto boggooda.
Bixiyeyaasha 'Ecommerce' waa inay ku daraan goobta xeeladahooda koritaanka. Tani waxay ka dhigan tahay tixgelinta walxaha sida afka hooyo ee SEO, bixinta sawirro ku habboon suuqa maxalliga ah - haddii aad tahay tafaariiqle reer Yurub ah oo isku dayaya inuu u iibiyo suuqa Aasiya, si gaar ah u adeegsiga sawirrada euro-udub dhexaad u ah bartaada ayaa kala saari doonta macmiil macquul ah
Dejintu waxay hubinaysaa in bartaadu ay tixgelinayso dhammaan dhaqanka dhaqameed ee gobollada aad isku dayeyso inaad ka iibiso.
Tani waxay umuuqan kartaa howl aan macquul aheyn. Goobo badan oo tafaariiq ah ayaa leh boqolaal bog oo si joogto ah loo cusbooneysiiyay oo shaqaaleysiinta turjubaano xirfadlayaal ah ayaa qaali ahaan qaali noqon doona. Isla mar ahaantaana, qaar badan ayaa laga yaabaa inay u tixgeliyaan tarjumaadda mashiinka iyo dejintoodu inay tahay mid jilicsan oo aan sax ahayn in lagu tiirsanaado. Laakiin sida qofkasta oo adeegsada softiweerka tarjumaadda mashiinku ogyahay, tikniyoolajiyaddu way soo fiicnaataa markasta. Teknoolojiyaddu waxay noqon kartaa aalad aad u qiimo badan oo loogu talagalay dejinta websaydhka, iyo markii lala kaashado dadka dhabta ah, waxay gaari kartaa dherer wareer ah.
Automatic vs Mashiinka Tarjumaadda
Fikrad khaldan oo caadi ah ayaa ah taas tarjumaad otomaatig ah waa wax la mid ah sida turjumaadda mashiinka. Sida laga soo xigtay Maamulka Caalamiga ah iyo Dejinta (GALA):
Tarjumaadda Mashiinka - softiweer si otomaatig ah u tarjumi kara waxyaabaha ku jira ilaha luuqadaha la bartilmaameedsanayo. Teknoolojiyadaha tarjumaadda mashiinka waxaa ka mid ah bixiyeyaasha sida Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translator, DeepL, iwm. Laakiin bixiyeyaasha tarjumaadda mashiinka ee laga codsado degel websaydhka ah waxay inta badan dabooli doonaan oo keliya luuqadaha hooyo marka booqdehu joogo goobta.
Tarjumida tooska ah - Tarjumaada otomaatiga ah waxay koobaysaa tarjumaada mashiinka laakiin wey dhaaftaa. Adeegsiga xalka tarjumaadda ma aha oo kaliya wax ka qabashada tarjumaadda nuxurkaaga laakiin sidoo kale maareynta iyo wax ka beddelka nuxurka, SEO ee bog kasta oo la tarjumay, ka dibna wuxuu si toos ah u maareeyaa daabacaadda maaddadaas si toos ah, suurtogalna u ah inuu noolaado adiga oo aan farta saarin. Tafaariiqleyda, waxsoosaarka codsigan tikniyoolajiyadda ayaa sare u qaadi kara iibka caalamiga ah waana mid qiimo jaban ku kacaya.
Dadka vs Tarjumaadda Mashiinka
Mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ee adeegsiga tarjumaadda mashiinka ee maxalliga waa saxsanaanta. Dad badan oo suuqley ah waxay dareemayaan tarjumaadda aadanaha oo buuxa inay tahay wadada kaliya ee lagu kalsoonaan karo ee horay loo socdo. Qiimaha tan, in kastoo, waa mid aad iyo aad u weyn oo mamnuuc ka ah tafaariiqleyaal badan - oo aan ku xuso ma daryeesho sida nuxurkaas la turjumay dhab ahaan loo soo bandhigi doono.
Tarjumaadda mashiinku waxay kuu badbaadin kartaa waqti badan saxnaantuna waxay kuxirantahay labada luuqadood ee laxushay iyo sida ay uhormartay uguna fiicantahay aaladaha tarjumaada labadaas lamaane. Laakiin waxaad dhahdaa, sida qiyaasta ballpark-ka in tarjumaaddu u fiicantahay 80% waqtiga, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad heshaa turjubaan xirfad leh si uu u hubiyo una saxo tarjumaadaha si waafaqsan. Adoo helaya lakabka koowaad ee tarjumaadda mashiinka waxaad dardar galineysaa geeddi-socodka ka dhigaya boggaaga inuu noqdo mid ku hadla luqado badan.
Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, doorashadan ayaa ah tixgelin weyn in la sameeyo. Haddii aad shaqaaleysid turjubaan xirfadle ah si aad uga bilowdid xoqdo oo aad uga shaqeysid qaddarro badan oo bogag internet ah, biilka aad soo xareyn doontid waxay u badan tahay inuu yahay xiddigiska. Laakiin haddii aad bilow lakabka koowaad ee tarjumaada mashiinka ka dibna keen turjumaano bini'aadam ah si ay ula qabsadaan meeshii loo baahdo (ama laga yaabee kooxdaada inay ku hadlaan luuqado badan) labadaba culeyskooda iyo qiimaha guudba si weyn ayaa loo dhimi doonaa.
Dejinta degelku waxay umuuqan kartaa mashruuc cabsi leh, laakiin si sax ah loola macaamilay iskudhaf ah tiknoolajiyad iyo awood dad ma ahan shaqo aad u weyn sida aad u maleyneyso. E-commerce xudduudaha xuduudaha waxay u baahan tahay inay noqoto istiraatiijiyad loogu talagalay suuqleyda inay horay u socdaan. Nielsen ayaa sidaas werisay 70% dukaamada taas oo ku soo fiday ganacsiga e-ganacsiga ee xuduudaha ayaa faa'iido u yeeshay dadaalkooda. Jid kasta oo loo maro ku-meel-gaarnimada waa inay noqotaa mid faa'iido leh haddii si wax ku ool ah loogu sameeyo tiknoolajiyada iyo xadka tiknoolajiyada maskaxda.
Tags: tarjumaad otomaatig ahDeepLganacsiga adduunkaganacsiga caalamiga ahtarjumaadda luqaddagoobtadegaankaturjumaadda mashiinkaturjumaad luqadeed gacanta
Augustin waa aasaasihii weglot, xalka luuqado badan ee bogagga internetka. Waxaa la abuuray 2016 - Weglot waxaa loo dhisay si turjumaad deg deg ah, fudud, oo deg deg ah looga dhigo. Iyada oo salka ku haysa dhaqaalaha, Augustin wuxuu u guuray adduunka SaaS si uu ula wadaago xalka ka caawiya shirkadaha inay soo saaraan koboc caalami ah.